Sony Xperia 1 III gara n'ihu na usoro kpochapụwo | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Sony
N'ihe na-erughi otu izu gara aga, anyị maara n'ụzọ zuru ezu ihe ọ ga-abụ ụdị nke atọ nke Sony's high-end, the Xperia 1. A smartphone na gara n'ihu na-eju Fans nke ụlọ ọrụ ahụ anya, na mgbakwunye na uru ọ na-enye, maka ịga n'ihu ịkụ nzọ na imewe kpochapụwo a na-ewepụwanyewanye na ọnọdụ nke oge a.
con akụkụ anọ nwere akụkụ na nkuku dị nkọ na akụkụ, na-echetara anyị smartphones site na 10 afọ gara aga. O doro anya na n'ahịa enwere ebe maka ụdị ụdị ọ bụla, na anyị na-ekwu mgbe niile na maka uto agba. Ọ bụghị n'efu, Sony nwere ndị na-azụ ahịa na-aga n'ihu ịkụ nzọ n'ụdị ha n'elu ndị ọzọ.
Sony Xperia 1 III, imewe na-aga n'ihu na gịnị kpatara ya?
Otu n'ime nnukwu ihe ọtụtụ n'ime ndị na-azụ ahịa bụ ihe ohuru. Anyị na-achọkarị akụkọ. Ọhụrụ arụ ọrụ, ndozi na uru, ọzọ batrị, igwefoto ka mma, ihuenyo, wdg. Banyere imewe, kemgbe ọtụtụ afọ, anyị nwere ike ịhụ na ọ na-agbanwe na ọnọdụ ma na-agbanwe okpokoro. Enwere ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na ebumnuche nke ịbụ nke mbụ na iche iche na ndị ọzọ emehiela. Oké ụjọ na-atụ aghụghọ aghụghọ nke adaala na usoro anaghị adịte aka.
Site na Sony ha na-ahọrọ mgbe niile maka nkà ihe ọmụma dị nnọọ iche ma nke ahụ na-arụ ọrụ. ¿Kedu ihe kpatara igbanwe okirikiri nhọrọ ukwuu ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ dị ka ọ dị? Yabụ anyị hụrụ etu nhazi ahụ gbanwere n’etiti nke izizi na nke abụọ nke Xperia 1 bụ obere ọrụ. Otu ihe ahụ na-agakwa maka Sony Xperia 1 III. Mba ịghara ịkụ nzọ na ọkpụrụkpụ mgbanwe imewe, ọ dị mkpa hapụ itinye akwụkwọ akụkọ niile nke oge ma melite akụkụ nke ọ bụla nke ngwaọrụ.
Sony Xperia 1 III nwere a elongated ihuenyo na-eme ka ụlọ ahụ. Otu panel oled na mkpebi 4Kna 21: 9 akụkụ ruru na a diagonal nke 6,5 sentimita. Igwefoto igwefoto fọrọ nke nta achọpụta na nke Sony Xperia 1 II, na anya m atọ kwụ ọtọ dị n'akụkụ aka ekpe nke azụ. Ọ ga-enwe nhazi ya aka Qualcomm nke ga-enye ndị dị mkpa ike n'ụzọ zuru ezu na-enwe ya nnukwu ihuenyo na-na Njikọ 5G.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony Xperia 1 III na-aga n'ihu na usoro kpochapụwo
Galaxy A51 malitere ịnata Android 11 na One UI 3.0